Izindaba - Amathiphu wokuthenga umshini wokusika / wokuqopha we-laser
Isinyathelo 1: Udaba Lokuqala Ukusekelwa.
Kunokungeniswa okuningi okushibhile, ikakhulukazi okuvela eChina, emakethe. Kepha ama-lasers yimishini eyinkimbinkimbi futhi ayaphuka futhi adinga ukulungiswa. Qiniseka ukuthi inkampani oyithengayo inokwethenjelwa futhi inikeza ukusekelwa okuhle kuwe nasemshinini wabo ngemuva kokuyithenga.
Nayi eminye imibuzo ongacabanga ngayo:
Kunzima kangakanani noma kulula kangakanani ukuthola izingxenye ezithathelwe indawo?
Ngabe banokusekelwa kobuchwepheshe?
Kulula kanjani ukuphendulwa umbuzo?
Ingabe banayo iwebhusayithi enhle?
Ingabe kukhona okokufundisa kokusebenzisa kanye / noma ukulungisa umshini?
Isinyathelo 2: Ukukhetha Umshini. Usayizi namandla.
Izinkinga ezimbili eziyinhloko engingagxila kuzo uma kukhulunywa ngokukhetha umshini ubukhulu bombhede namandla e-laser.
Usayizi wombhede wemishini uzonquma ukuthi ungakanani ucezu lwento ongalulinganisa emshinini ukusika noma ukuqopha. Umbhede omkhulu uzokuvumela ukuthi usike noma uqophe izingcezu ezinkulu futhi noma ngabe wenza okuthile okuncane, njengobucwebe be-laser cut, umbhede omkhulu uzokuvumela ukusika izingcezu eziningi ngasikhathi sinye kunesisodwa ngasikhathi. Futhi eminye imishini inombhede ongaguquki kanti eminye inombhede ongakhuphuka futhi wehle. Umbhede okhuphuka uye phansi ukuvumela ukuba uqophe izinto ezingafani. Ukujula okusikayo akuguquki kepha uma ufuna ukuqopha ilogo esicathulweni sesikhumba kunasecezwini lesicaba, ukuba nombhede ongakwehlisa ukuze uthole isicathulo emshinini kubalulekile.
Umagazini olandelayo ngamandla we-laser. Amandla we-laser alinganiswa kuma-Watts. Ama-watts amaningi i-laser inamandla amakhulu. I-laser, ebengiyisebenzisa, iqale nge-30 watt laser yabe seyithuthukiselwa ku-50 watt. Amandla we-laser abaluleke kakhulu ekusikeni. Khumbula ukujiya kwento enganqunywa i-laser kunqunywa yiphuzu lokugxila kwelensi hhayi amandla e-laser. Ngakho-ke ukufaka i-laser enamandla kakhulu ngeke kukuvumele ukuthi usike izinto ezijiyile. Kepha kuzokuvumela ukuthi usike ngokushesha futhi ngokuthembekile. I-laser ebuthakathaka izosho ukubambezela i-laser ukuze ikwazi ukusika kahle.
Ngingasikisela ukuthola umshini omkhulu kunayo yonke ongayenza bese uqala nge-laser ebuthakathaka. Umbhede omkhulu uzokuvumela ukuthi usebenze kumadizayini amakhulu noma usike futhi uqophe izingcezu eziningi ngasikhathi sinye. Ungathuthukisa i-laser ekuyo iye kunamandla amakhulu kamuva.